မသွားပါနှင့် - သင်၏ Vis ည့်သည်များကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ရည်ရွယ်ချက် ၃ ချက်မှထွက်ပေါ်လာသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ။ | Martech Zone
မသွားပါနှင့် - သင်၏ Vis ည့်သည်များကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ရည်ရွယ်ချက် ၃ ချက်မှထွက်ပါ
စနေနေ့, မေလ 2, 2015 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 တွမ်ရေတံခွန်
ရည်ရွယ်ချက်နည်းပညာမှထွက်ပါ။အဲ့ဒါဘာလဲ?) ။ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏ KC နှင့် The Sunshine Band ၏မူကွဲ မသွားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး.
A / B စစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာသောရည်ရွယ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ lay ည့်သည်များအားစွန့်ခွာသူများကိုကယ်တင်ရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုစမ်းသပ်ခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ကြိမ်သက်သေပြခဲ့သည် အစပျိုးအကြောင်းအရာများတွင်အထူးလျှော့စျေးကုဒ်များသို့မဟုတ်သတင်းလွှာ sign-up အချက်ပြချက်များပါဝင်သည်။ အချို့ကဤကြားဖြတ်ဖောက်သည်များသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းစနစ်အနည်းငယ်သည်ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများပြုလုပ်ရာတွင်သင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတန်ပြန်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
နည်းဗျူဟာ # ၁ - အပိုင်း၊ အပိုင်း၊ အပိုင်း
သင်၏ထွက်ခွာရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတင်းပို့ခြင်းကိုသင်၏ visit ည့်သည်အခြေစိုက်စခန်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အားသာချက်များရှိသည်။ သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာ discount ည့်သည်များအားလုံးကိုဝီလီယံ - nilly လျှော့စျေးကုဒ်များထုတ်ပေးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လျှော့စျေးကုဒ်များ၏အဆိုပြုချက်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပျက်စီးစေပြီးသစ္စာမဲ့သောစျေးဝယ်သူများအားမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ပိုမိုထိရောက်သောနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ထိပ်တန်းဖောက်သည်များ - သင်၏သစ္စာရှိရှိအမြဲလာရောက်လည်ပတ်သူအခြေစိုက်စခန်း - အားပြည့်နှက်။ အပြိုင်အဆိုင်များသောစျေးကွက်တွင်ဖောက်သည်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အထူးလျှော့စျေးများဖြင့်ဆုချခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေကြောင်းလိုင်းဖောက်သည်များအနက်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းချိုသာပြီးတန်ဖိုးထားမှုမြင့်မားသောလျှော့စျေးများကိုသာပစ်မှတ်ထားနိုင်ရန်အော့ဖ်လိုင်းသုံးစွဲသူဗဟိုပြုအချက်အလက်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀ န်ဆောင်မှုအချက်အလက်များနှင့်သမိုင်း ၀ င်ကြည့်ရှုခြင်း / ၀ ယ်ခြင်းအပြုအမူများကိုပေါင်းစပ်။ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကဏ္ across သုံးခုတွင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာနှုန်းအထိကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများပြုလုပ်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်အနေဖြင့်သင်သည် visit ည့်သည်သည်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပါကသတင်းလွှာစာရင်းသွင်းရန်သာတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်သင်၏စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်သော segment ၏ယုတ္တိကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည် (pun ရည်ရွယ်) ။
နည်းဗျူဟာ ၂ - ရေနှင့်တူသည်
သင်၏နည်းဗျူဟာသည် overlay ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ box ကိုအပြင်မှာစဉ်းစားပါ (Pun နောက်တဖန်ရည်ရွယ်) ။ သင့်ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ပါ (Bruce Lee အကြံပြုသကဲ့သို့) နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာ၏တင်ဆက်မှုကိုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြင့်စဉ်း စား၍ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းပါးပြီးဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ကြိုးစားပါ ဟလိုဘား စာမျက်နှာပေါ်ရှိ browsing ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပုံမှန် brash overlay အစား (အသုံးပြုသူမှပယ်ဖျက်နိုင်သည့် screen ထိပ်ဘက်ရှိ message တစ်ခုကဲ့သို့) ။ သိုမဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာအချို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုသည်စတော့ရှယ်ယာနိမ့်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှုနိမ့်ခြင်းစသည့်အချက်များကဲ့သို့အာရုံစူးစိုက်ပါ။
ဤကဲ့သို့သော cue တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင်သည်ထိုင်ခုံငါးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကျန်ရှိသည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များရှိကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ နည်းလမ်းများစွာတွင်အရာအားလုံးသည် Tactic # 1 သို့အမြဲတမ်းပြန်ရောက်သွားသည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနောက်ဆုံးအဆုံးတွင်သင်ထပ်မံမြင်ရလိမ့်မည်)
နည်းဗျူဟာ ၃ - အသုံးဝင်ပါစေ
သင်ကျယ်လောင်သောလျှော့စျေးထိုးရန်မလိုအပ်ပါ ဒီနေရာမှာ sign-up visit ည့်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌သတင်းစကား။ လိုအပ်သည့် or ည့်သည်ကိုအချိန်မီကူညီနိုင်သည်။
တစ်ဦးအတွက် အခြေခံ အိမ်အာမခံကိုရောင်းချသည့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့သည်ဖောက်ထွင်းမှုမှတစ်ဆင့်ခရီးသွားစဉ် title ည့်သည်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ် (ကျားမရရှိရန်)၊ မွေးသက္ကရာဇ် (အသက်အပိုင်းအခြားကိုဖန်တီးရန်) နှင့်အခြားအရာများ (နည်းဗျူဟာ ၁ ကိုကြည့်ပါ) နောက်တဖန်) ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအတိုင်းအတာများကိုတစ်ဆင့်ချင်းကူးပြောင်းခြင်းနှုန်းများနှင့်လျှောက်လွှာ၏စာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းခြင်းက visit ည့်သည်အပေါ် အခြေခံ၍ ပွတ်တိုက်မှုအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက်အပိုင်းအခြားအမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသော visitors ည့်သည်များသည်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်သို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပို၍ နိမ့်သောနှုန်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဖြေ? အကယ်၍ သူတို့သည်အချိန်အတန်ကြာပျင်းရိနေပြီးထွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြပါကဤ visitors ည့်သည်များကိုချက်ချင်းအကူအညီပေးရန်ကမ်းလှမ်းမှုဖြင့်ပစ်မှတ်ထားရန်။ ရလဒ်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံသာမကဖောက်သည်ခေါ်ဆိုမှုစင်တာမှသိမ်းဆည်းထားသောလျှောက်လွှာများကိုပြသသည်။
ဤနည်းဗျူဟာများကိုသင်၏ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်နည်းဗျူဟာများ၌အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေရုံသာမကရည်ရွယ်ချက်ကျော်လွှားမှုများထွက်ပေါ်လာသည့်တစ်ခါတစ်ရံညစ်ညမ်းသောနည်းလမ်းများကြောင့် visitors ည့်သည်များကိုမမောင်းထုတ်ရန်သေချာစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မှသာသင်၏ for ည့်သည်များအတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်ရန်သေချာသည်။ သို့သော်အချက်မှာသင်သည် site ည့်သည်အားယဉ်ကျေးစွာဆွဲဆောင်နိုင်မည့်အစားသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ပြန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည် ကျေးဇူးပြုပြီးမသွားပါနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမသွားပါနဲ့.
မသွားပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်ဖတ်ရှုခြင်း၊ Exit Intent ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ချဉ်းကပ်နည်းများကိုကြည့်ပါ။
Tags: ထွက်ပေါက် divထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်မဟာဗျူဟာများထွက်ပေါက်ပေါ်လာစာရင်းသွင်းခြင်း။
Tom Waterfall သည် EMEA နှင့် APAC တို့အတွက် Optimization Solutions ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ သူသည်ဖောက်သည်များအတွက် ၃၆၀ ဒီဂရီပိုမိုကောင်းမွန်သောမဟာဗျူဟာများပို့ပေးခြင်း၊ သူတို့၏ site ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ROI စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ omni-channel နှင့် personalization တွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Tom သည်အွန်လိုင်းရှိသည့်အခါစားသုံးသူများမည်သို့ပြုမူသည်နှင့်မည်သို့ကွဲပြားသည်ကိုတုံ့ပြန်ရန်နားလည်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။
ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုသေစေသောထိပ်ဆုံးအရာ ၅ ခု
၅။ သင်၏အီးမေးလ်ကို Spam Folder ထဲ၌ရောက်သွားနိုင်သည်